Halabuurka: Waxaa ku jira budada gram: Oxytetracycline ………………………………… 25mg. Xayeysiis xayeysiis ……………………………………… .1g. Sharraxaadda: Oxytetracycline premix waa koox bakteeriyada antibiyootigga ah ee tetracyclines, taas oo xakameysa isku-darka borotiinka bakteeriyada. Waxay ku hawlan tahay la-dagaallanka naxwaha-xun iyo naxdinta xasaasiga ah ee loo yaqaan 'Sympto ...
Tilmicosin fosfoos premix
Halabuurka: Tilmicosin (sida fosfooras) ……………………………………………………………………… 200mg Qaadiyaha xayeysiinta ah ………………………………………… …………………………………. 1 g Sharaxaad: Tilmicosin waxaa si kimikal ah wax looga beddelaa antibiyootiga loo yaqaan 'macrolide' ee muddo dheer shaqeynayay daawada xoolaha. waxay si firfircoon ugu hawlgashaa ka-hortagga naxwaha iyo qaar microorganisms-gram-xun (streptococci, staphylococci, pasteurella spp., mycoplasmas, iwm.). iyadoo afka laga adeegsado doofaarka, tilmatosinku wuxuu gaaraa heerarka dhiigga ugu badnaan 2 saacadood ka dib wuxuuna joogteeyaa sumad-daweynta sare ee ...
Halabuurka: tiamax (tiamulin 80%) waa feed a premix oo ka kooban 800 g oo ah tirinarag hydrogen fumarate halkii kiilog. Tilmaanta: tiamulin waa astaamo isku-dhafan oo loo yaqaan 'pleuromutilin'. waxay si firfircoon uga hortagtaa unugyada unugyada unugyada-wanaagsan, mycoplasmas iyo serpulina (treponema) hyodysenteriae. tiamulin waxaa loo isticmaalay ka hortagga iyo xakameynta cudurada mycoplasmal sida enzootic pneumonia iyo cudurka neef-mareenka ee raaga ee doofaarka iyo digaagga; Dheecaannada doofaarka, xiidmaha 'porcine colonic spirochaetosis iyo porcine prol ...
Halabuurka: Flofenicol ……………………………………………………………………… 100mg Milkiile xayeysiis ah …………………………………. ……………………………. 1 g Sharaxaad: Florfenicol waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo dawooyin ah oo loo yaqaan 'anthenicols anti-spectrum spectrum', oo ka soo horjeedda bakteeriyada-gram-good kala duwan, oo ah bakteeriyada Gram-negative iyo mycoplasma waxay leeyihiin hawlo ka hortagga bakteeriyada. Florfenicol waa astaamaha jeermiska bakteeriyada, ayagoo ku xiraya 50-meeyada 'ribosomal', oo xakameynaya isku xirnaanta borotiinka bakteeriyada. Florfenicol ee firfircoonida bakteeriyada bakteeriyada badan ee sheyga iyo chloramp ...
Halabuurka: Ivermectin 0.2%, 0.6%, 1%, 2% Qeexid: 0.2%, 0.6%, 1%, 2% Ivermectin waa mid wax ku ool ah daaweynta iyo xakamaynta ku dul nooleyaasha gudaha iyo dibedda ee lo'da, idaha, riyaha, doofaarka iyo Tilmaanta geela: Vetomec waxaa loo muujiyey daaweynta iyo xakameynta wareegyada caloosha, hunguriga, xoqitaanka, goroyada, ubaxyada, injirta, jiirka iyo caarada xoolaha, ido, riyaha iyo geela. Gooryaanka caloosha: Caarada spp., Haemonchus placei, oesophagostomum radiatus, ostertagia ...
Halabuurka: Diclazuril ………………………… 5mg Qaadiyaha xayeysiinta ah ....... hufnaan, daroogooyinka sunta aticoccidial ee sunta, oo si weyn loogu isticmaalo coccidiosis digaagga. Diclazuril anticoccidial sistem garaam ma aha wax cad. kaalinta ugu weyn ee coccidia peak, oo leh noocyo kaladuwan iyo noocyo kala duwan oo leh coccidia, sida eimeria qodobka ugu muhiimsan ee jiilka labaad ee coccidia wareega galmada. laakiin weyn, ...